Kuthungathwa abesimame abathathu ngezinsolo zokudlwengula indoda | News24
Kuthungathwa abesimame abathathu ngezinsolo zokudlwengula indoda
Pretoria - Owesilisa wasePitoli usale eshaqekile kulandela isigameko sokudlwengulwa abantu besifazane abathathu ngesonto eledlule.
Esitatimendeni samaphoyisakuvele ukuthi indoda eneminyaka engu-23 ubudala yaseNellmapius empumalanga yePitoli ithe yahlangabezana nalolu dweshu ngoLwesihlanu ngesikhathi igibela etekisini kuSolomon Mahlangu Drive ibheke edolobheni khona ePitoli.
Amaphoyisa aphenya icala lokudlwengula futhi athungatha izigilamkhuba, athe isisulu sithe ngaphandle komshayeli kwakukhona abantu besifazane abathathu etekisini.
Endleleni ebheke edolobheni umshayeli wetekisi washintsha indlela, kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Colette Weilbach.
OLUNYE UDABA: Udlwengulwe ngabesifazane ababili waquleka
Uthe le ndoda esencane yatshelwa ukuthi ize ngaphambili. Oyedwa wala bantu besifazane kusolwa ukuthi wayijova ngomjovo ongaziwa yaquleka.
"Ithe yaphaphama egumbini engalazi elinombhede owodwa futhi omncane. Abasolwa kusolakala ukuthi babe sebephoqa le ndoda ukuthi iphuze i-energy drink ngaphambi kokushintshana ngayo beyidlwengula usuku lonke," kusho uCaptain Weilbach.
Uthe ngeSonto ntambama le ndoda bayishiya ehlathini eliseBenoni.
Le ndoda yayibuhlungu ngokuyehlele kodwa isilutholile usizo lodokotela, kusho uCaptain Weilbach.
"Amaphoyisa ophiko lweSouth African Police Service (SAPS) amacala okuhlukumeza ngokocansi awathathela phezulu awakhathaleli bulili.
"ITshwane Central Cluster FCS iqinisekisa zonke izisulu zokuhlukunyezwa ngokocansi ukuthi izokwenza uphenyo olunzulu ukuze kuzoboshwa izigilamkhuba," kusho uCpatain Weilbach.
Unxuse lowo onolwazi ngesigameko ukuba axhumane neTshwane Central Cluster FCS Unit ku-(012) 353 5301 okanye amaphoyisa ophiko lwe-SAPS ku-08600 10111 noma athumele umqhafazo ku-32211.